रक्षा मन्त्रालय आफैलाई राखेर प्रधानमन्त्रीले गरे मन्त्रिपरिषद् विस्तार, को-को बने नयाँ मन्त्रि ? - Pardeshi Khabar
रक्षा मन्त्रालय आफैलाई राखेर प्रधानमन्त्रीले गरे मन्त्रिपरिषद् विस्तार, को-को बने नयाँ मन्त्रि ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपनि रक्षा मन्त्रालय भने आफै विस्तार गरेका छन् ।
यस्तै राज्यमन्त्रीहरुमा चन्द्रकान्त चौधरी (ऊर्जा), रेणुका गुरुङ (महिला तथा बालबालिका) र आशाकुमारी विक (वन) रहेका छन् । यो खबर रातो पार्टीले प्रकाशित गरेका छन ।
« स्वास्थ्यमन्त्री तामाङको सम्पत्ति : काठमाडौंसहित १४ ठाउँमा जग्गा, २२ तोला सुन (Previous News)
(Next News) ओखल्ढुङ्गामा स्वास्थ्यकर्मी माथि शिक्षकद्वारा दुव्र्यवहार »